Kakain’ny samy mpandraharaha : teratany srilankely maty novonoin’ny namany ihany | NewsMada
Hita faty tao an-tranony, tany Andilamena, ny teratany srilankey iray, 58 taona, ny alahady maraina teo. Araka ny fizahana nataon’ny dokotera sy ny zandary, voalaza fa novoina ity teratany vahiny ity. Nahitana ratra ny tenany ary nisy ihany koa ny mangana taminy. Raha ny fanazavana azo ihany, efa fantatra ny nahavanona ny famonoana, izay teratany srilankey roa lahy akaiky ity maty. Mandeha ny fikarohana azy roa lahy ireo. Tsy hita tany an-toerana intsony izy ireo taorian’ny fahafatesan’ity rangahy ity.
Ny tombantomban’ny famotorana no nilazana fa mety ho kakay teo amin’ireo samy Srilankey izao vonoan’olona izao. Mety ihany koa ny halatra nataon’ireo namany ihany tao amin’ity novonoina. Mpandraharaha amin’ny vato sy volamena ny ahatongavan’ireo Srilankey eto amintsika amin’ny ankapobeny. Maro ny olona miserasera amin’izy ireo mivarotra vato, ary anisan’ny maro izy ireny any Ilakaka. Efa maromaro ihany koa izy ireo any Andilamena any, izay mifindrafindra any amin’izay toerana misy mitrandraka vato.
Ankoatra ny fifamonoana eo amin’ny samy teratany vahiny toy ity mitranga ity, anisan’ny mampitombo ny isan’ny olon-dratsy ihany koa ny fisian’ny mpandraharaha vahiny mampiasa vola amin’ireny vato sy volamena ireny. Antapitrisany ny vola mihodina amin’izy io ka mahasarika ny olon-dratsy. Manimba ny tontolon’ny fandraharahana eto amintsika ny fisian’ny vonoan’olona, asan-jiolahy tahaka izao. Hatramin’ny mpizahatany no mihemotra noho ny tsy fandriampahalemana miseho matetika amin’ny faritra maro.